Hutsva hutsva uye madonhwe muMadrid Stock Exchange | Ehupfumi Zvemari
Kunge gore rega idzva rinotanga, rine akateedzana enhau zvine chekuita neakanyanya mareti emusika wemasheya emari dzeSpanish Mune ino kesi, pamwe nekubatanidzwa kwehunhu hutsva uye, kune rimwe divi, kutsakatika kwevamwe izvo haichazovipo munzvimbo dzekutengesa. Chero nzira, zvingave zviri nyore kuti iwe uzive kuti ndeapi matanho anokanganiswa nechiyero ichi sezvo zvingave kuti iwe unowana kushamisika kusinganzwisisike mumazuva ekutanga aNdira.
Iyi nhanho mukuita zvinoreva kuti kubva zvino zvichienda mberi uchave uine mamwe masiteki emitengo ayo iwe aunogona kuita mashandiro kuti mari ichengetedze. Uye kuti kusvika gore rino razvino vanga vasina mukana wekutorwa basa. Pane kupokana, vamwe vatove ivo havazogamuchire ako mashandiro stock stocks uye nekudaro uchave uine zvimwe zvausingakwanise mavari. Ehezve, kudzokororwa uku hachisi chinhu chitsva kana chakasarudzika, asi zvinoitika nguva dzose nekutendeuka kwegore.
Kune rimwe divi, ichi ndicho chiitiko cheakawandisa chekambani chichava kudonhedza chaiko mumutengo we Zvivakwa zveAbertis, mushure mekubviswa muStock Market muna Nyamavhuvhu 6 mushure mePublic Acquisition Offer (OPA) yakaitwa naHochtief neAdveo Group International. Icho chimwe chekuchengetedzeka kwaive neakakwira yakakwira mune yenyika equity benchmark index. Kusiya inozvidzivirira chikamu chemigwagwa mumamiriro asina kusimba uye nemumiriri usingakoshi uchienzaniswa nemamwe maexte index eEurope.
1 Madrid Stock Exchange: kukwira nekudzika
2 Maitiro anokonzera kubuda
3 Kurasikirwa pamusika wemasheya weMadrid
4 Ichakanganisa sei mashandiro ako?
5 Maitiro ane aya maitiro
6 Unyanzvi hwehunyanzvi hwemakambani matsva
Madrid Stock Exchange: kukwira nekudzika
Kwegore rino razvino, zviyero zveSpanish zvichagadzirwa neyakaenzana 127 tsika, mushure mekubatanidzwa kwezvinhu zvina zvitsva uye kubvisa zvimwe zvina. Management Management yeGeneral Index yeMadrid Stock Exchange (IGBM) yakafunga, zvinoenderana neTechnical Standards yeComposition uye Kuverenga kweIndices, kubvumidza kuumbwa kweIGBM uye iyo Total Index yehafu yekutanga ye2019.
Zvichienderana nekutengesa uye capitalization data yegore, mana matsva matsva anowedzerwa kuindekisi uye mamwe mana anodonhedzwa zvine chekuita nekuumbwa kwekupedzisira, iko IGBM neiyo Total Index muhafu yekutanga ye2019 zvavari ine 127 tsika.
Dare zvakare rakurudzira kurongwazve kwemasekete umo Financial neReal Estate Sector Index yakakamurwa kuita maviri: iyo Financial Services Sector Index uye iyo Real Estate Services Sector Index. Zvinoenderana nechirongwa ichi, iyo nyowani Yemari Sector Index ichave 4 Indices dzezvikamu: Mabhangi neKuchengetedza Mabhangi, Inishuwarenzi, Kubata uye Kubata Makambani, uye Investment Services. Zvichakadaro, iyo Real Estate Services Sector ichave iine 2 subsector Indices: Real Estate nevamwe uye SOCIMI.
Maitiro anokonzera kubuda
Aya ndiwo maitiro auchazove nawo kubva zvino mumatanho ekutengesa emusika wemusika uye pfupiso yeshanduko maererano nekuumbwa kwekupedzisira ndeinotevera:
Amrest Holdings, sekukosha kwekubvumirwa kutsva paStock Market munaNovember 21, 2018. Inosanganisirwa muIndekisi yeCustomer Services Sector, Leisure, Tourism uye Hospitality Subsector.
Arima Real Estate Socimi, seye nyowani nyowani yezvinyorwa muna Gumiguru 23, 2018. Inosanganisirwa muReal Estate Services Sector Index, Socimi Subsector.
Berkeley Energia Limited, semutengo mutsva wekupinda paStock Exchange muna Chikunguru 18, 2018. Inosanganisirwa muIndekisi yeZvinhu Zvekushandisa, Indasitiri uye Chikamu Chekuvaka, Zvicherwa, Metali neMetallic Zvigadzirwa Shanduko Subsector.
Solarpack Technological Corporation, semutengo mutsva wekupinda paStock Exchange muna Zvita 5, 2018. Inosanganisirwa muOiri neMagetsi Sector Index, Renewable Energy Subsector.
Kurasikirwa pamusika wemasheya weMadrid
Pane kudaro, iwe uchaona kuti zvimwe zvekuchengetedza hazvichawanikwe uye nekudaro hazvizove chinhu cheako mashandiro mumisika yequity. Ndidzo dzinotevera dzatinokufumura pazasi kuitira kuti iwe uzvitarise paunenge uchigadzirira rako rinotevera rekudyara.
Zvivakwa zveAbertis, yekubviswa kubva kuStock Market muna Nyamavhuvhu 6, 2018, mushure mePublic Offering of Acquisition (OPA) yakaitwa naHochtief AG.
Adveo Boka International, yakamiswa kubva mukutengesa neCNMV munaNovember 14, 2018 semhedzisiro yekugadzirisazve mari uye kutorwa kwenzira yekudzivirira yakapihwa muchinyorwa 5bis cheMutemo 22/2003.
Borges Zvekurima & Maindasitiri Nuts, yekusasangana nesarudzo uye yekugara zvachose.
Mapepa eEuropean uye Makadhibhokisi, semhedzisiro yekutora mari yezvikamu zvayo zvakaitwa naDS Smith Plc. chinangwa chayo ndechekusimudzira kubviswa kwemasheya kubva mukutengesa paSpanish Stock Exchange.
Ichakanganisa sei mashandiro ako?
Nezve kuchengetedzeka kutsva pamusika wemasheya, chinonyanya kukufadza panguva ino kubva svondo rino unogona kutoshanda mazviri, kuisa kutenga nekutengesa maodha senge mune mamwe ese. Kunyange zvakadaro, ine mukana wekutadza hapana kuongororwa kwakadzama pamitsara yebhizinesi rako. Senge ivo vasingaratidze ongororo yehunyanzvi nechikonzero chakareruka chekuti kusvika parizvino havasati vatengeswa paruzhinji. Naizvozvo, zvinoda iwe kubhadhara basa rakawanda kuita sarudzo yekuona kana iri imwe nzira yakanaka yekuita kuti capital iwanikwe mukati megore inobatsira.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti aya maratidziro haasi pasi, kwechinguvana, ehuwandu hwevamiririri nevamiriri vezvemari. Iwe unenge uine mashoma parameter ekuvhura zvinzvimbo uye mupfungwa iyi njodzi dzinenge dzakakwira zvakanyanya kupfuura muzvivigiro zvakanyorwa pamisika yeSpain equity kwemakore nemakore. Uye zvakare, hapana mubvunzo kuti yavo yekutengesa vhoriyamu ichave yakadzikira kwazvo sezvo chikamu chakanaka cheaya marekisheni emusika wekutengesa anobva mashoma kwazvo makambani emari. Kusvika padanho rekuti ivo vanozove vasina kugadzikana mumazuva ekutanga ekutengesa.
Maitiro ane aya maitiro
Chekutanga pane zvese, zvakakosha kwazvo kusimbisa kuti kushanda nemaitiro aya kwakanyanya kuomarara kupfuura mamwe ese. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti hapana kutariswa panguva yakakodzera kwehunhu hwavo mumisika yequity. Hazvishamisi kuti ivo havana ruzivo nezve nhoroondo yemutengo uye izvi zvinoita kuti zvinyanye kuoma kuongorora kana vari pamutengo wakanaka wekutenga kana kwete. Izvo zvinonetsa mukushambadzira kudyara zvakakura zvakanyanya, uko, kune rimwe divi, pasina chirevo kune mukana wekudzokorodza uyo waungaburitse panguva dzese.
Kune rimwe divi, imwe yemhando dzayo inonyanya kukosha ndeye volatility mumitengo yavo. Nemisiyano yakakura kwazvo mukushandurwa kwemitengo yavo yepamusoro uye yepasi uye iyo inogona kutopfuura mamazinga e5%. Muchiitiko ichi chisina kujairika, zvakajairika kune vashoma uye varipakati varimari kutsamira kune imwe nhevedzano yekuchengetedzeka uye kuti havazogadzi chero eaya matambudziko. Vangori chete vane ruzivo rwekufungidzira ndivo vane hanya nekutengeserana nemakambani aya achangopinda mumisika yemari.
Unyanzvi hwehunyanzvi hwemakambani matsva
Makambani anoita kutanga kwavo mumisika yemari aripo anonyatso tsanangurwa mushe. Kutanga, idzi idiki diki dzemari kuchengetedzeka uye kuti chete nekuchengetedzeka kushoma kunogona kusimudzira mitengo yavo mune imwe nzira kana imwe. Sezvinei, vanowanzo tenderera kukanganisa nemaoko akasimba emisika yemari. Ivo saka vane njodzi zvakanyanya uye mashandiro avo akagadziriswa nenjodzi iri mavari. Kusvika padanho rekuti zvinogona kutaurwa pasina kutya kukanganisa kuti zvakanyanyisa kuomarara kuita kuti mari inowanikwa iwane purofiti nezvikumbiro zvemusika wekutengesa. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Imwe yemamwe madhinominesheni emakambani aya anotanga kutengesera muequities ndeyekuti iwo akavhurika fungidziro yekurwisa. Hazvishamise kuti vanogona kuenda kubva mukukoshesa 4% kusvika 3% yemutengo wavo mumaminetsi mashoma. Vangari chete vane ruzivo rwakanyanya mumisika yemari vanovhurika mashandiro eaya maitiro. Iko kune njodzi dzakakwira uye iyo purofiti yavanogona kupa zvinoita kusahadzika kunonetsa kujekesa chero nguva.
Kana isu hatikwanise kukanganwa kuti makambani aya haana mitsara yebhizimusi inobatsira uye muzviitiko zvakawanda aine huwandu hwechikwereti chinokwezva kutarisa kwevaongorori vezvemari. Muchirevo chechinyorwa ichi, hazviite zano rakanaka rekudyara. Kunyanya mugore kunge rakaomarara pamusika wemasheya sezvazvinoratidzika kunge zvichazove izvi. Ehezve, pane zvirinani sarudzo dzekuita kuti kuchengetedza kubatsire uye ndipo paunofanirwa kuenda kubva panguva idzi chaidzo.
Ino haisi nguva yekuyedza nekutengesa equity nekuti pane zvakawanda zviri panjodzi kubva zvino zvichienda mberi. Hapana chakaderera pane yako mari. Iko kune njodzi dzakakwira uye iyo purofiti yavanogona kupa zvinoita kusahadzika kunonetsa kujekesa chero nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Maitiro matsva uye madonhwe paMadrid Stock Exchange
Maitiro ekusarudza mari yekudyara